လှုံ့ဆော်မှုဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ သင်မည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
လှုံ့ဆော်မှုဆိုသည်မှာသင့်အားတွန်းပို့ပေးသည့်စွမ်းအားဖြစ်သည် အချို့သောအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဆောင်ရန်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်သဘာဝဇီဝကမ္မလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်သောကြောင့်အနည်းဆုံးလှုံ့ဆော်မှုလိုအပ်သည်။ အခြားသူများမှာမူ၊ ပိုမိုအားကောင်းသောစွမ်းအားလိုအပ်သည်။
ဒါကသူတို့ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲချင်တဲ့လူတွေနဲ့အတူတူပါပဲ။ ကျန်းမာရေးတိုးတက်စေရန်အစားအစာကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ကြံ့ခိုင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်အားကစားကစားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်စေရန်ဘာသာစကားတစ်ခုသင်ယူခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ဤအရာအားလုံးသည်အရေးကြီးသောပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လူတိုင်းမရှိကြသောလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုလိုအပ်သည်.
ကံကောင်းထောက်မစွာ, ရှိပါတယ် လှုံ့ဆျောမှုတိုးတက်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများနှင့်ကိရိယာများ။ ဒါကဒီအပိုင်းမှာလူအများခံစားနေရတဲ့ဒီရှုထောင့်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့မတူညီတဲ့ယန္တရားတွေ၊ အမျိုးမျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှုထောင့်တွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တဲ့ကွဲပြားခြားနားတဲ့လုပ်ရပ်တွေလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်မှုတွေအကြောင်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကွဲပြားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုဒီအပိုင်းမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ဤကဏ္inတွင်သင်တွေ့ရမည့်သတင်းအချက်အလက်အားဖြင့်သင်စိတ်ထဲရှိရှိသမျှလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုသင်ကိုယ်တိုင်လာအောင်နှိုးဆွနိုင်သည့်တိုးတက်မှုပုံပြင်များ၊ လှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာစကားစုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ လည်းပဲ အကြံပေးချက်များနှင့် tools တွေအမျိုးမျိုးတို့ကို သင်၏ဆန္ဒများတိုးတက်စေရန်နှင့်သင်၏ရည်ရွယ်ချက်များအားလုံးအကောင်အထည်ဖော်ရန်လိုအပ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုကိုရရှိရန်အတွက်ဟောပြောပို့ချခြင်း၊
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့လက်ထဲမှာအလုပ်မှာဖြစ်စေ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်စေအပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။ အကယ်စင်စစ်သင်သည်များသောအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုအလုပ်လုပ်ရန်၊ အားကစားမှန်မှန်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်သင်သိသောအရာများကိုစားသုံးခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အကြိမ်များစွာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ မင်းကအမြဲတမ်းနေလား၊ ကိစ္စရပ်အများစု၌အချိန်မတန်ဘဲစွန့်ခွာခြင်းများရှိတတ်သည်, လှုံ့ဆျောမှုတစ်ခုမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်လူများသည်မိမိကိုယ်ကိုဆင်ခြေများဖြင့်လှည့်စားတတ်ကြသည် -“ ငါဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး”၊ “ ငါလိုချင်တာအားလုံးကိုလုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူး”၊ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ကိစ္စအများစုမှာ၊ သင်လိုချင်တာထက်ပိုပြီးမလိုအပ်ပါ ငါတို့ဘဝတစ်ချိန်ချိန်မှာလိုအပ်နေတဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့စဖို့ခင်ဗျားရဲစွမ်းသတ္တိ။
အားကစားလုပ်ရန်အထူးအဝတ်အစားများမလိုအပ်ပါ။ အားကစားဖိနပ်များသာလိုအပ်သည် နေ့တိုင်းနည်းနည်းခက်ခဲကြိုးစားရန်လှုံ့ဆော်မှု။ ပုဂ္ဂလိကအကယ်ဒမီတွင်သင်တန်းတစ်ခုအတွက်သင်ငွေပေးစရာမလိုပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်စတင်နိုင်သောမရေမတွက်နိုင်သောအခမဲ့သင်တန်းများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင့်မှာအချိန်ပိုများရန်မလိုပါ၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်မှန်ကန်သောအခိုက်အတန့်ကိုရှာတွေ့ရန်သင့်တွင်ရှိပြီးသားအရာများကိုစုစည်းရန်သင်ယူရန်သာလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူအများစုကသူတို့လုပ်ချင်တာကိုမလုပ်နိုင်တာကြောင့်သူတို့လုပ်ချင်တာကိုမလုပ်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်အဲဒါ ၎င်းသည်လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်းမှဆင်းသက်လာသည့်ဆင်ခြေတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပြီးပြည့်စုံတဲ့အခိုက်အတန့်လောက်မဟုတ်ဘူး၊
ဤအချက်သည်သင်၏အချိန်ကာလဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာများတွင်မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု (သို့) ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစသည့်အခြေခံကဏ္aspectsများတိုးတက်ရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။ သငျသညျလှုံ့ဆျောမှုရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်သည့်အတူ သင်အဆင်မပြေသောအရာအားလုံးကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောကြောင့်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့များကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်အဲဒါကိုလုပ်လို့မရဘူးလို့ခံစားရရင်စိတ်မပူပါနဲ့သင်မလိုအပ်ပါ။ ဘဝဟုခေါ်သည့်ဤလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့လိုက်ပါလာပြီးသင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရရှိနိုင်ရန်သင့်အားလမ်းပြမှုကိုပြသသည်။
por မာရီယာဟိုဆေး Roldan လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
သင်သည်အဝေးတစ်နေရာမှဆက်ဆံရေးတစ်ခုတွင်နေထိုင်သည့်အခါသင်၏ခံစားချက်များသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ မင်းရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုလွမ်းနေတယ် ...
လူနှစ် ဦး သည်ထာဝရအချစ်ကိုမည်သည့်အချိန်၌မျှတိုင်တည်။ ကျိန်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ထာဝရတည်မြဲမည်မဟုတ်ဟုယူမှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးတွင်အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မည်ဟုသူတို့ထင်သလား။
လူများသည်ရည်မှန်းချက်ကိုချမှတ်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုရှိပုံရသော်လည်း၎င်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့အမြဲတစေမတွေ့ဆုံနိုင်ပါ။ မင်းပန်းတိုင်တွေဘယ်နှစ်ကြိမ်ချထားခဲ့ပြီးပြီလဲ ...
ခက်ခဲသောအချိန်များအတွက်မျှော်လင့်ချက်၏ 43 စာပိုဒ်တိုများ
ဘဝ၌သင်ရှေ့ဆက်ရန်မျှော်လင့်ချက်ရောင်ခြည်လိုအပ်သည့်အချိန်များရှိသည်။ ငါတို့သိသည့်အတိုင်း ...
Coronavirus ပိတ်ခြင်းကိုဘယ်လိုတွန်းလှန်ရမလဲ (နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်အကူအညီရယူရန်)
၄ င်းတို့သည် coronavirus နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသည်ဟုသံသယရှိသူများကိုသီးခြားခွဲထုတ်ရန်အကြံပေးသည် (နေပါ ... )
သင်တစ် ဦး တည်းအိမ်၌နေလျှင်ဘာလုပ်ရမည်နည်း
သင်တစ် ဦး တည်းအိမ်၌ရှိနေစဉ်၊ နံရံများကသင့်အပေါ်သို့ကျနေသည်ဟုထင်မိနိုင်သည်၊